642s dil Ki Suno | အပိုင်း4| သွား၊ မသွားပါ images and subtitles
မင်္ဂလာပါ အရာအားလုံးမှန်တယ်? ငါဂျပန်ခရီးစဉ်အတွက်အစီအစဉ်နှင့်အတူစတင်ပါလိမ့်မယ်ထင်ခဲ့တယ် လုပ်ဖို့သုတေသနတွေအများကြီးရှိပါတယ် ဟိုတယ်ကိုဘွတ်ကင်လုပ်ရန်လေယာဉ်လက်မှတ်ကြိုတင်မှာယူရန်လိုသည် စီမံကိန်းအများကြီး ငါအရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ် ဂျေး? ဘာဖြစ်သွားတာလဲ? ဂျေး ဘာ? သငျသညျဤခရီးစဉ်မှလွဲ။ ဒီနှစ်ကတိပြုခဲ့သည် သင်သည်အခြားဘာမှတက်ရောက်ရန်မဟုတ်ဘူး ကြည့်ရတာစိတ်မကောင်းပါဘူး ငါကြိုးစားခဲ့သည်အလွန်စိတ်မကောင်းပါဘူး သို့သော်ဤကဲ့သို့သောအလုပ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ ဖြစ်လာလိမ့်မည် အဘယ်အချိန်တွင်အလုပ်မှအချိန်အနည်းငယ်ယူပါမည်နည်း။ ကြည့်ရတာငါမသိဘူး ဒါပေမဲ့မင်းသူတို့ကိုပြောဖို့လိုတယ် အိုကေသူတို့ကိုငါပြောမည် ဒါပေမယ့်ဒီနှစ်မှာချစ်သူမဖြစ်နိုင်ဘူး ဂျေးသင်ဤလေး နှစ်မှစ၍ ဤသို့ပြောခဲ့ဖူးသည် တခါတရံတွင်ကွန်ဖရင့်၊ တစ်ခါတစ်ရံတွင်အစည်းအဝေးရှိသည် တစ်ခါတစ်ရံအစေး နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရီးစဉ်ဟာဖျက်သိမ်းသွားပါတယ် ကြည့်ရှုသည် ... ချယ်ရီပန်းပွင့်ပွဲတော်သည်တစ်နှစ်တစ်ကြိမ်ပြုလုပ်သည် အဲဒါကြောင့် ကျေးဇူးပြုပြီးသွားခွင့်ပေးပါ ငါသိတယ်ဒါပေမယ့်ငါ့ညီလာခံလည်းတစ်နှစ်တစ်ကြိမ်လာတတ်တယ် ပြီးတော့ဝမ်းနည်းစရာကတစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ဒါပေမယ့်ကံကောင်းတာကကျွန်တော်တို့မှာလက်မှတ်တွေကြိုတင်စာရင်းမသွင်းရသေးပါဘူး ဒါနဲ့မင်းကိုဂျပန်ကိုနောက်တစ်ခေါက်သွားနိူင်တယ် ငါကတိပေးတယ် သို့သော်ချယ်ရီပန်းပွင့်ပွဲတော်မရှိပါ ကြည့်ပါ ... ဒါဟာငါ့အတွက်အထူးပဲ - ဒါကြောင့် - ဘာလို့အမေနဲ့အဖေနဲ့မလိုက်တာလဲ။ သငျသညျအတူတူအများကြီးခရီးသွားလေ့ရှိတယ် မှတ်မိလား ဟုတ်တယ် အမေနဲ့အဖေက Neha နဲ့အတူ US မှာရှိတယ် မင်းမေ့သွားတယ် ဒါပေမယ့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် နောက်တစ်ခါငါခန့်မှန်း နားလည်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မင်းကိုချစ်တယ် ကိုယ်လည်းမင်းကိုချစ်တယ် ငါရေချိုးခန်းယူသွားပါလိမ့်မယ် Shit! ထပ်? ဟုတ်တယ် ကျနော်တို့မနေ့ကအငြင်းအခုံရှိခဲ့ပါတယ် ဆိုလိုတာကသူ့မှာအလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကတိက ၀ တ်တွေရှိတယ် ဒါပေမယ့်တောင်မှငါလေးနှစ်ကတည်းက Cherry Blossom ပွဲတော်ပျောက်ဆုံးနေသည် ဒီချယ်ရီပန်းပွင့်ပွဲတော်ကဘယ်လောက်ကောင်းပါသလဲ။ Dude, နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း Mia Sake ပွဲတော်ဖွင့်ဖို့အဲဒီမှာလာပါတယ် သူ၏အနုပညာသစ်ကိုပြသရန် ထိုအသိသာသူတစ် ဦး ဒဏ္legာရီပါပဲ ငါသူ့အလုပ်ကိုနှစ်သက်တယ် - ဒါဆို? ဒါဆိုဒါကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဖြစ်မယ် ထိုအခါငါကလက်လွတ်သွားတယ် ဒါဆိုတစ်ယောက်တည်းသွားလုပ်ပါ့။ ဘာ? တစ်ယောက်တည်းလား ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်ုပ်သည် Cherry Blossom ပွဲတော်အတွက်အရေးကြီးသည်မဟုတ်ပါ ဒီတော့တစ်ယောက်တည်းသွား မင်းရူးနေတာလား ငါတစ်ယောက်တည်းခရီးမသွားဘူး ထိုအခါငါပဲဤအဘို့အလုပ်မဟုတ်ပါဘူး မင်းဘာကိုဆိုလိုတာလဲ? ငါဆိုလိုတာကတစ်ယောက်တည်းခရီးသွားရတာကအရမ်းကြောက်စရာကောင်းတယ် အမေနဲ့အဖေတို့၊ Neha တို့အမြဲတမ်းခရီးထွက်ခဲ့ဖူးတယ် ဟုတ်လား ဘွဲ့ရပြီးနောက်ငါ့အကောလိပ်သူငယ်ချင်းများ ပြီးတော့ဂျေး ဒါကြောင့်အခြေခံအားဖြင့်တော့အမြဲတမ်းခရီးသွားဖော်တစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ် ဒါကြောင့်တစ်ကိုယ်တော်ခရီးသွားခွင့်ဘယ်တော့မှမရခဲ့ပါဘူး အိန္ဒိယနိုင်ငံမှပထမဆုံးတစ်ကိုယ်တော်ခရီးစဉ် နည်းလမ်းမရှိ သငျသညျဤမျှလောက်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း, ဤမျှလောက်သုတေသနလိုအပ်ပါတယ် တဖန်သင်တို့ရှိသမျှသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်ပြုရမည် တစ်ခုခုမှားသွားရင်ကော။ ငါမသိဘူး တစ်ကိုယ်တော်ခရီးသွားခြင်းနှင့်အားလုံး ... ဒီတစ်ခါလည်းအခြားသူများဖြစ်ဖို့ရည်ရွယ်နေကြသည် ငါမဟုတ်ဘူး ကြည့်ပါ ဦး၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လိုင်းအသစ်တစ်ခုကိုအကျဉ်းစေလွှတ်ခဲ့သည် သင်ကမှတဆင့်သွားချင်တယ်? ဟုတ်ပါတယ် ဝက်အူ အိုကေ ... ဂျပန် Cherry Blossom ပွဲတော်ဂျပန် အိုကေ ... ချယ်ရီပန်းပွင့်ရက်များနှင့်အချိန် အိုကေ အကောင်းဆုံးနေရာ Hirosaki ရဲတိုက်ကျောက် Woah! အစပြုသူများအတွက်တစ်ကိုယ်တော်ခရီး ကျွန်ုပ်ပိုင်ဆိုင်ရာအားလုံးရှိသည့်အိတ်ကိုမဆုံးရှုံးမှီတိုင်အောင်ကျွန်ုပ်သည် ၀ မ်းသာပါသည် ထိုအခါငါခြေလျင်ထခဲ့ရတယ် ဘာ? ငါနေမကောင်းသလိုဖုန်းဆက်သွယ်မှုမရှိဘူး သူတို့ဘယ်သွားကြတာလဲ အိုကေ ထိုအခါမူကားငါကမိသားစုကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ် အဘယ်သူသည်ငါ့ကိုဂရုစိုက်နှင့်ထိုချစ်စရာကောင်းတဲ့စုံတွဲငါ့ကိုနွေးထွေးသောဟင်းချိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏ ငါ့ကိုဂရုစိုက်တယ် မဆိုးပါဘူး ဒါဟာကျွန်တော့်ဘဝရဲ့အံ့သြဖွယ်အကောင်းဆုံးခရီးစဉ်ပဲ ဒီခြေလှမ်းကိုကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ယူပြီးပျော်ရွှင် ဒါမကောင်းဘူး ဘုရားသခ... ငါလူမသိဘူး ဒီမှာသင့်လက်ဖက်ရည်ပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဒီဟာအရမ်းကောင်းတယ် ငါလက်ဖက်ရည်ကိုချစ်၏ - ကောင်းပြီလား - အင်း ဒါဆိုမင်းခေါင်းထဲမှာဘာတွေဖြစ်နေတာလဲ။ Tara သည်ကျွန်ုပ်၏စိတ်ထဲတွင်အတွေးအခေါ်များမထည့်ပါ ငါနောက်ဆုံးညဥ့်ချယ်ရီ Blossom အပေါ်ရောက်ရှိနေခဲ့သည် ဒါပေမယ့်အသုံးပြုမှုကဘာလဲ မင်းတကယ်သွားချင်တယ် သင်တစ်ယောက်တည်းသွားမလားမဆုံးဖြတ်ရဘူး ဒါပေမယ့်မင်းဘာသိလဲ လူများသည်ထိုကဲ့သို့သောကြောက်စရာအတွေ့အကြုံများကိုအင်တာနက်ပေါ်တွင်မျှဝေခဲ့ကြသည် မယုံနိုင်ဘူး ငါရှစ်နှစ်ကတည်းကသင်၏စီးပွားရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဖြစ်ခဲ့သည် နှင့်သင်၏မိတ်ဆွေ ငါမင်းကိုအရမ်းကောင်းတယ် ဘာမှနောင်တမရပါဘူး ဒီလက်ဖက်ရည်ကိုငါကြိုက်တယ် ဒီမှာသင်၏ပေါင်မုန့်နှင့်ယို ဘာဖြစ်သွားတာလဲ? မင်းဘာလို့ဝမ်းနည်းတာလဲ Cherry Blossom ကိုကျွန်တော်ခန့်မှန်းလို့ရလား ဂျပန်လား Tara ကငါ့ကိုတစ်ယောက်တည်းသွားဖို့ပြောနေတယ် မကောင်းတဲ့စိတ်ကူး ငါမဟုတ်သင်ညီလာခံကိုသွားရန်ရှိသည် မဟုတ်ပါ။ ဒါဟာအလွန်မိုက်မဲသောစိတ်ကူးပါ မင်းရဲ့ ဦး နှောက်ကပြောနေတာပဲ၊ မင်းရဲ့နှလုံးသားကဘာပြောတာလဲ။ ဘာလဲသိလား? ငါနင့်ကိုလွမ်းတယ် လက်ဖက်ရည်? မဟုတ်ဘူးငါစိတ်ဓာတ်မကျဘူး ငါနှစ်မိနစ်အတွင်းတွင်ထပ်မံငါမေးပါလိမ့်မယ် စောင့်ပါ ဘာဖြစ်သွားတာလဲ? အခုပိုကောင်းလား။ လက်ဖက်ရည်အရမ်းကောင်းတယ် မဟုတ်ဘူးဟုကျွန်ုပ်မည်သို့ပြောနိုင်သနည်း။ စကားမစပ် တစ်ကိုယ်တော်ခရီးကိုသင်ဘယ်လိုထင်ခဲ့လဲ ငါဆိုလိုတာကမင်းဘာကိုကြောက်တာလဲ ငါဂျေးမသိဘူး တစ်ခုခုဖြစ်လာရင်ကော။ မင်းအရင်နေရာတွေအများကြီးကိုရောက်ခဲ့တယ် ဟုတ်လား အင်းဒါပေမယ့်ဘယ်တော့မှတစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ဘူး ငါတို့ဘာလီခရီးကိုမှတ်မိလား ငါတို့အိတ်ပျောက်သွားတဲ့အခါ - ကျွန်ုပ်တို့၏ပိုက်ဆံအိတ်နှင့်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်နှင့်အတူ - အင်း သငျသညျအရာအားလုံးကိုကိုင်တွယ်သူတ ဦး တည်းရှိကြ၏ သင်တဲတစ်နေရာရာတွင်တစ်ယောက်ယောက်ကိုခေါ်လိုက်သည် ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်သွားဖို့ဟိုတယ်ကိုခေါ်တယ် - မှန်ကန်သော - ဘုရားသခင် ထိုနေ့သည်အလွန်မိုးရွာခဲ့သည် ငါသည်သင်တို့ကိုဘာမှမကိုင်တွယ်နိုင်ကပြောသည်ကိုကြည့်ပါ ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ လုံး ၀ စိတ်မပူပါနဲ့ ငါဂျေးသိပေမယ့် ကျွန်တော်မသိသေးဘူး သင့်နှလုံးသားကိုသာနားထောင်ပါ ဟုတ်တယ် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကွန်ဖရင့်ကိုဘယ်အချိန်သွားမှာပါလဲ Sunil, ဒီယူပါ မြန် အိုး သတိရတယ် အိုး ဟုတ်တယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျားတကယ်ကောင်းတဲ့ကွန်ဖရင့်တစ်ခုရှိတယ် ငါ့ကိုနည်းနည်းလွမ်းပါ ငါစဉ်းစားမယ် သင်သည်သင်၏ Japan၊ Cherry Blossom ကိုနှစ်သက်သည် ပြီးတော့ဓာတ်ပုံတွေအားလုံးကိုရောက်တာနဲ့ချက်ချင်းပဲငါ့ကိုခေါ်ပါ - ငါမယ် - မင်းကိုဂုဏ်ယူတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ထိုသူတို့ကဘယ်လိုပြောသလဲ - Udichiba? - Sayonara! အိုဟုတ်တယ်! ဆရာမ - Sayonara ဂျေး! - နုတ်ဆက်ပါတယ်!
dil Ki Suno | အပိုင်း4| သွား၊ မသွားပါ
< start="13.3" dur="1.117"> မင်္ဂလာပါ >
< start="15.042" dur="1.25"> အရာအားလုံးမှန်တယ်? >
< start="16.417" dur="2.833"> ငါဂျပန်ခရီးစဉ်အတွက်အစီအစဉ်နှင့်အတူစတင်ပါလိမ့်မယ်ထင်ခဲ့တယ် >
< start="19.417" dur="2.083"> လုပ်ဖို့သုတေသနတွေအများကြီးရှိပါတယ် >
< start="21.625" dur="2.708"> ဟိုတယ်ကိုဘွတ်ကင်လုပ်ရန်လေယာဉ်လက်မှတ်ကြိုတင်မှာယူရန်လိုသည် >
< start="24.458" dur="1.584"> စီမံကိန်းအများကြီး >
< start="26.167" dur="1.458"> ငါအရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ် >
< start="29.042" dur="1.041"> ဂျေး? >
< start="31.375" dur="1.5"> ဘာဖြစ်သွားတာလဲ? >
< start="40.208" dur="1.667"> ဂျေး ဘာ? >
< start="46.333" dur="1.917"> သငျသညျဤခရီးစဉ်မှလွဲ။ ဒီနှစ်ကတိပြုခဲ့သည် >
< start="48.333" dur="1.625"> သင်သည်အခြားဘာမှတက်ရောက်ရန်မဟုတ်ဘူး >
< start="50.042" dur="1.958"> ကြည့်ရတာစိတ်မကောင်းပါဘူး >
< start="52.083" dur="1.542"> ငါကြိုးစားခဲ့သည်အလွန်စိတ်မကောင်းပါဘူး >
< start="53.75" dur="3.708"> သို့သော်ဤကဲ့သို့သောအလုပ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ ဖြစ်လာလိမ့်မည် >
< start="57.583" dur="2.167"> အဘယ်အချိန်တွင်အလုပ်မှအချိန်အနည်းငယ်ယူပါမည်နည်း။ >
< start="59.875" dur="1.958"> ကြည့်ရတာငါမသိဘူး >
< start="61.958" dur="1.292"> ဒါပေမဲ့မင်းသူတို့ကိုပြောဖို့လိုတယ် >
< start="63.375" dur="1.083"> အိုကေသူတို့ကိုငါပြောမည် >
< start="64.583" dur="2.042"> ဒါပေမယ့်ဒီနှစ်မှာချစ်သူမဖြစ်နိုင်ဘူး >
< start="67.458" dur="2.75"> ဂျေးသင်ဤလေး နှစ်မှစ၍ ဤသို့ပြောခဲ့ဖူးသည် >
< start="70.417" dur="2.083"> တခါတရံတွင်ကွန်ဖရင့်၊ တစ်ခါတစ်ရံတွင်အစည်းအဝေးရှိသည် >
< start="72.583" dur="1.75"> တစ်ခါတစ်ရံအစေး >
< start="74.583" dur="2.709"> နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရီးစဉ်ဟာဖျက်သိမ်းသွားပါတယ် >
< start="79.792" dur="0.708"> ကြည့်ရှုသည် ... >
< start="81.125" dur="2.75"> ချယ်ရီပန်းပွင့်ပွဲတော်သည်တစ်နှစ်တစ်ကြိမ်ပြုလုပ်သည် >
< start="84.292" dur="1.125"> အဲဒါကြောင့် >
< start="85.542" dur="1"> ကျေးဇူးပြုပြီးသွားခွင့်ပေးပါ >
< start="86.667" dur="2.458"> ငါသိတယ်ဒါပေမယ့်ငါ့ညီလာခံလည်းတစ်နှစ်တစ်ကြိမ်လာတတ်တယ် >
< start="89.333" dur="1.334"> ပြီးတော့ဝမ်းနည်းစရာကတစ်ချိန်တည်းမှာပဲ >
< start="90.875" dur="1.208"> ဒါပေမယ့်ကံကောင်းတာကကျွန်တော်တို့မှာလက်မှတ်တွေကြိုတင်စာရင်းမသွင်းရသေးပါဘူး >
< start="92.167" dur="2.125"> ဒါနဲ့မင်းကိုဂျပန်ကိုနောက်တစ်ခေါက်သွားနိူင်တယ် >
< start="94.417" dur="0.666"> ငါကတိပေးတယ် >
< start="95.208" dur="3.125"> သို့သော်ချယ်ရီပန်းပွင့်ပွဲတော်မရှိပါ >
< start="98.917" dur="2.916"> ကြည့်ပါ ... ဒါဟာငါ့အတွက်အထူးပဲ >
< start="102" dur="1.75"> - ဒါကြောင့် - ဘာလို့အမေနဲ့အဖေနဲ့မလိုက်တာလဲ။ >
< start="103.875" dur="1.833"> သငျသညျအတူတူအများကြီးခရီးသွားလေ့ရှိတယ် >
< start="105.833" dur="1.084"> မှတ်မိလား >
< start="107.042" dur="0.916"> ဟုတ်တယ် >
< start="108.042" dur="2.5"> အမေနဲ့အဖေက Neha နဲ့အတူ US မှာရှိတယ် >
< start="110.667" dur="1.583"> မင်းမေ့သွားတယ် >
< start="115.333" dur="1.459"> ဒါပေမယ့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် >
< start="117.5" dur="2.5"> နောက်တစ်ခါငါခန့်မှန်း >
< start="122" dur="1.292"> နားလည်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် >
< start="124.042" dur="1.208"> မင်းကိုချစ်တယ် >
< start="125.375" dur="1.208"> ကိုယ်လည်းမင်းကိုချစ်တယ် >
< start="126.875" dur="1.333"> ငါရေချိုးခန်းယူသွားပါလိမ့်မယ် >
< start="138.875" dur="1.458"> Shit! ထပ်? >
< start="140.458" dur="0.959"> ဟုတ်တယ် >
< start="141.542" dur="2.125"> ကျနော်တို့မနေ့ကအငြင်းအခုံရှိခဲ့ပါတယ် >
< start="143.833" dur="2.792"> ဆိုလိုတာကသူ့မှာအလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကတိက ၀ တ်တွေရှိတယ် >
< start="146.708" dur="4.375"> ဒါပေမယ့်တောင်မှငါလေးနှစ်ကတည်းက Cherry Blossom ပွဲတော်ပျောက်ဆုံးနေသည် >
< start="151.208" dur="2.084"> ဒီချယ်ရီပန်းပွင့်ပွဲတော်ကဘယ်လောက်ကောင်းပါသလဲ။ >
< start="153.5" dur="3.417"> Dude, နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း Mia Sake ပွဲတော်ဖွင့်ဖို့အဲဒီမှာလာပါတယ် >
< start="157" dur="1.458"> သူ၏အနုပညာသစ်ကိုပြသရန် >
< start="158.583" dur="1.917"> ထိုအသိသာသူတစ် ဦး ဒဏ္legာရီပါပဲ >
< start="160.583" dur="1.084"> ငါသူ့အလုပ်ကိုနှစ်သက်တယ် >
< start="161.75" dur="3.292"> - ဒါဆို? ဒါဆိုဒါကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဖြစ်မယ် >
< start="165.25" dur="1.417"> ထိုအခါငါကလက်လွတ်သွားတယ် >
< start="166.792" dur="2.25"> ဒါဆိုတစ်ယောက်တည်းသွားလုပ်ပါ့။ >
< start="170.042" dur="1.583"> ဘာ? တစ်ယောက်တည်းလား >
< start="171.75" dur="5.167"> ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်ုပ်သည် Cherry Blossom ပွဲတော်အတွက်အရေးကြီးသည်မဟုတ်ပါ >
< start="177" dur="1.5"> ဒီတော့တစ်ယောက်တည်းသွား >
< start="178.667" dur="1.375"> မင်းရူးနေတာလား >
< start="180.208" dur="1.292"> ငါတစ်ယောက်တည်းခရီးမသွားဘူး >
< start="181.583" dur="3.167"> ထိုအခါငါပဲဤအဘို့အလုပ်မဟုတ်ပါဘူး >
< start="184.833" dur="1.292"> မင်းဘာကိုဆိုလိုတာလဲ? >
< start="186.333" dur="3.584"> ငါဆိုလိုတာကတစ်ယောက်တည်းခရီးသွားရတာကအရမ်းကြောက်စရာကောင်းတယ် >
< start="190" dur="4"> အမေနဲ့အဖေတို့၊ Neha တို့အမြဲတမ်းခရီးထွက်ခဲ့ဖူးတယ် >
< start="194.125" dur="0.625"> ဟုတ်လား >
< start="194.833" dur="1.875"> ဘွဲ့ရပြီးနောက်ငါ့အကောလိပ်သူငယ်ချင်းများ >
< start="196.833" dur="1.292"> ပြီးတော့ဂျေး >
< start="198.25" dur="2.708"> ဒါကြောင့်အခြေခံအားဖြင့်တော့အမြဲတမ်းခရီးသွားဖော်တစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ် >
< start="201.583" dur="2.584"> ဒါကြောင့်တစ်ကိုယ်တော်ခရီးသွားခွင့်ဘယ်တော့မှမရခဲ့ပါဘူး >
< start="205.5" dur="2.167"> အိန္ဒိယနိုင်ငံမှပထမဆုံးတစ်ကိုယ်တော်ခရီးစဉ် >
< start="208.417" dur="1.166"> နည်းလမ်းမရှိ >
< start="209.708" dur="2.792"> သငျသညျဤမျှလောက်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း, ဤမျှလောက်သုတေသနလိုအပ်ပါတယ် >
< start="212.583" dur="1.959"> တဖန်သင်တို့ရှိသမျှသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်ပြုရမည် >
< start="215.083" dur="1.667"> တစ်ခုခုမှားသွားရင်ကော။ >
< start="217.417" dur="1.5"> ငါမသိဘူး >
< start="219.042" dur="1.333"> တစ်ကိုယ်တော်ခရီးသွားခြင်းနှင့်အားလုံး ... >
< start="220.833" dur="2.042"> ဒီတစ်ခါလည်းအခြားသူများဖြစ်ဖို့ရည်ရွယ်နေကြသည် >
< start="223" dur="0.958"> ငါမဟုတ်ဘူး >
< start="224.042" dur="2.291"> ကြည့်ပါ ဦး၊ >
< start="226.458" dur="2.375"> ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လိုင်းအသစ်တစ်ခုကိုအကျဉ်းစေလွှတ်ခဲ့သည် >
< start="228.917" dur="1.083"> သင်ကမှတဆင့်သွားချင်တယ်? >
< start="230.083" dur="1.625"> ဟုတ်ပါတယ် >
< start="252.167" dur="1.25"> ဝက်အူ >
< start="264.292" dur="2.208"> အိုကေ ... ဂျပန် >
< start="271.333" dur="4.625"> Cherry Blossom ပွဲတော်ဂျပန် >
< start="278.458" dur="1.042"> အိုကေ ... >
< start="281.583" dur="5.334"> ချယ်ရီပန်းပွင့်ရက်များနှင့်အချိန် >
< start="287" dur="1.375"> အိုကေ >
< start="295" dur="6.167"> အကောင်းဆုံးနေရာ Hirosaki ရဲတိုက်ကျောက် >
< start="309.625" dur="4.667"> အစပြုသူများအတွက်တစ်ကိုယ်တော်ခရီး >
< start="316.5" dur="3.25"> ကျွန်ုပ်ပိုင်ဆိုင်ရာအားလုံးရှိသည့်အိတ်ကိုမဆုံးရှုံးမှီတိုင်အောင်ကျွန်ုပ်သည် ၀ မ်းသာပါသည် >
< start="319.833" dur="2"> ထိုအခါငါခြေလျင်ထခဲ့ရတယ် >
< start="322.708" dur="1.375"> ဘာ? >
< start="325.583" dur="3.625"> ငါနေမကောင်းသလိုဖုန်းဆက်သွယ်မှုမရှိဘူး >
< start="329.333" dur="1.542"> သူတို့ဘယ်သွားကြတာလဲ >
< start="333.208" dur="1.167"> အိုကေ >
< start="334.542" dur="1.833"> ထိုအခါမူကားငါကမိသားစုကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ် >
< start="336.5" dur="4.292"> အဘယ်သူသည်ငါ့ကိုဂရုစိုက်နှင့်ထိုချစ်စရာကောင်းတဲ့စုံတွဲငါ့ကိုနွေးထွေးသောဟင်းချိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏ >
< start="340.917" dur="1.666"> ငါ့ကိုဂရုစိုက်တယ် >
< start="344.167" dur="1.375"> မဆိုးပါဘူး >
< start="347.625" dur="3.083"> ဒါဟာကျွန်တော့်ဘဝရဲ့အံ့သြဖွယ်အကောင်းဆုံးခရီးစဉ်ပဲ >
< start="351.083" dur="2.042"> ဒီခြေလှမ်းကိုကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ယူပြီးပျော်ရွှင် >
< start="353.25" dur="1.583"> ဒါမကောင်းဘူး >
< start="359.042" dur="1.291"> ဘုရားသခ... >
< start="366.667" dur="1.625"> ငါလူမသိဘူး >
< start="382.125" dur="1.292"> ဒီမှာသင့်လက်ဖက်ရည်ပါ >
< start="383.542" dur="1.25"> ကျေးဇူးတင်ပါတယ် >
< start="387" dur="1.583"> ဒီဟာအရမ်းကောင်းတယ် >
< start="390.917" dur="1.166"> ငါလက်ဖက်ရည်ကိုချစ်၏ >
< start="392.167" dur="1.75"> - ကောင်းပြီလား - အင်း >
< start="394" dur="2.167"> ဒါဆိုမင်းခေါင်းထဲမှာဘာတွေဖြစ်နေတာလဲ။ >
< start="396.292" dur="3.083"> Tara သည်ကျွန်ုပ်၏စိတ်ထဲတွင်အတွေးအခေါ်များမထည့်ပါ >
< start="399.5" dur="3.125"> ငါနောက်ဆုံးညဥ့်ချယ်ရီ Blossom အပေါ်ရောက်ရှိနေခဲ့သည် >
< start="402.833" dur="0.834"> ဒါပေမယ့်အသုံးပြုမှုကဘာလဲ >
< start="403.75" dur="1.917"> မင်းတကယ်သွားချင်တယ် >
< start="405.792" dur="2.125"> သင်တစ်ယောက်တည်းသွားမလားမဆုံးဖြတ်ရဘူး >
< start="408" dur="0.875"> ဒါပေမယ့်မင်းဘာသိလဲ >
< start="408.958" dur="2.584"> လူများသည်ထိုကဲ့သို့သောကြောက်စရာအတွေ့အကြုံများကိုအင်တာနက်ပေါ်တွင်မျှဝေခဲ့ကြသည် >
< start="411.625" dur="1.292"> မယုံနိုင်ဘူး >
< start="414.708" dur="2.042"> ငါရှစ်နှစ်ကတည်းကသင်၏စီးပွားရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဖြစ်ခဲ့သည် >
< start="416.875" dur="1.292"> နှင့်သင်၏မိတ်ဆွေ >
< start="418.417" dur="1.625"> ငါမင်းကိုအရမ်းကောင်းတယ် >
< start="420.167" dur="2.375"> ဘာမှနောင်တမရပါဘူး >
< start="425.167" dur="1.25"> ဒီလက်ဖက်ရည်ကိုငါကြိုက်တယ် >
< start="429.417" dur="1.875"> ဒီမှာသင်၏ပေါင်မုန့်နှင့်ယို >
< start="434.708" dur="1.792"> ဘာဖြစ်သွားတာလဲ? မင်းဘာလို့ဝမ်းနည်းတာလဲ >
< start="437.667" dur="1.791"> Cherry Blossom ကိုကျွန်တော်ခန့်မှန်းလို့ရလား >
< start="439.625" dur="1.208"> ဂျပန်လား >
< start="442.833" dur="2.459"> Tara ကငါ့ကိုတစ်ယောက်တည်းသွားဖို့ပြောနေတယ် >
< start="447.125" dur="1.5"> မကောင်းတဲ့စိတ်ကူး >
< start="448.75" dur="2.917"> ငါမဟုတ်သင်ညီလာခံကိုသွားရန်ရှိသည် >
< start="451.792" dur="1.083"> မဟုတ်ပါ။ >
< start="453" dur="2"> ဒါဟာအလွန်မိုက်မဲသောစိတ်ကူးပါ >
< start="455.083" dur="3.459"> မင်းရဲ့ ဦး နှောက်ကပြောနေတာပဲ၊ မင်းရဲ့နှလုံးသားကဘာပြောတာလဲ။ >
< start="461.75" dur="0.917"> ဘာလဲသိလား? >
< start="462.875" dur="1.042"> ငါနင့်ကိုလွမ်းတယ် >
< start="464.083" dur="1.042"> လက်ဖက်ရည်? >
< start="465.208" dur="1.875"> မဟုတ်ဘူးငါစိတ်ဓာတ်မကျဘူး >
< start="467.208" dur="1.209"> ငါနှစ်မိနစ်အတွင်းတွင်ထပ်မံငါမေးပါလိမ့်မယ် >
< start="468.542" dur="1.166"> စောင့်ပါ >
< start="486.5" dur="1.042"> ဘာဖြစ်သွားတာလဲ? >
< start="487.667" dur="1.041"> အခုပိုကောင်းလား။ >
< start="488.833" dur="1.625"> လက်ဖက်ရည်အရမ်းကောင်းတယ် >
< start="490.583" dur="1.334"> မဟုတ်ဘူးဟုကျွန်ုပ်မည်သို့ပြောနိုင်သနည်း။ >
< start="492" dur="1.542"> စကားမစပ် >
< start="493.667" dur="1.666"> တစ်ကိုယ်တော်ခရီးကိုသင်ဘယ်လိုထင်ခဲ့လဲ >
< start="495.458" dur="2.167"> ငါဆိုလိုတာကမင်းဘာကိုကြောက်တာလဲ >
< start="497.708" dur="1.292"> ငါဂျေးမသိဘူး >
< start="499.5" dur="1.417"> တစ်ခုခုဖြစ်လာရင်ကော။ >
< start="501.042" dur="2.208"> မင်းအရင်နေရာတွေအများကြီးကိုရောက်ခဲ့တယ် >
< start="503.708" dur="0.959"> ဟုတ်လား >
< start="504.75" dur="2.417"> အင်းဒါပေမယ့်ဘယ်တော့မှတစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ဘူး >
< start="508.625" dur="6.333"> ငါတို့ဘာလီခရီးကိုမှတ်မိလား >
< start="515.667" dur="1.416"> ငါတို့အိတ်ပျောက်သွားတဲ့အခါ >
< start="517.708" dur="1.875"> - ကျွန်ုပ်တို့၏ပိုက်ဆံအိတ်နှင့်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်နှင့်အတူ - အင်း >
< start="519.667" dur="1.5"> သငျသညျအရာအားလုံးကိုကိုင်တွယ်သူတ ဦး တည်းရှိကြ၏ >
< start="521.333" dur="3.834"> သင်တဲတစ်နေရာရာတွင်တစ်ယောက်ယောက်ကိုခေါ်လိုက်သည် >
< start="525.375" dur="3.083"> ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်သွားဖို့ဟိုတယ်ကိုခေါ်တယ် >
< start="528.625" dur="1.333"> - မှန်ကန်သော - ဘုရားသခင် >
< start="530.042" dur="1.708"> ထိုနေ့သည်အလွန်မိုးရွာခဲ့သည် >
< start="532.25" dur="1.958"> ငါသည်သင်တို့ကိုဘာမှမကိုင်တွယ်နိုင်ကပြောသည်ကိုကြည့်ပါ >
< start="534.625" dur="1.542"> ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ လုံး ၀ စိတ်မပူပါနဲ့ >
< start="536.292" dur="1.333"> ငါဂျေးသိပေမယ့် >
< start="537.75" dur="1.208"> ကျွန်တော်မသိသေးဘူး >
< start="540.333" dur="1.209"> သင့်နှလုံးသားကိုသာနားထောင်ပါ >
< start="541.958" dur="1.084"> ဟုတ်တယ် >
< start="543.625" dur="1.125"> ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် >
< start="544.875" dur="2.083"> ကွန်ဖရင့်ကိုဘယ်အချိန်သွားမှာပါလဲ >
< start="554.5" dur="1.333"> Sunil, ဒီယူပါ >
< start="558.25" dur="1.125"> မြန် >
< start="571.375" dur="2.083"> အိုး သတိရတယ် >
< start="573.583" dur="2"> အိုး ဟုတ်တယ် >
< start="575.875" dur="1.208"> ကျေးဇူးတင်ပါတယ် >
< start="577.958" dur="3.625"> ခင်ဗျားတကယ်ကောင်းတဲ့ကွန်ဖရင့်တစ်ခုရှိတယ် >
< start="581.708" dur="1.375"> ငါ့ကိုနည်းနည်းလွမ်းပါ >
< start="583.208" dur="1.042"> ငါစဉ်းစားမယ် >
< start="584.333" dur="1.959"> သင်သည်သင်၏ Japan၊ Cherry Blossom ကိုနှစ်သက်သည် >
< start="586.375" dur="1.958"> ပြီးတော့ဓာတ်ပုံတွေအားလုံးကိုရောက်တာနဲ့ချက်ချင်းပဲငါ့ကိုခေါ်ပါ >
< start="588.417" dur="1.75"> - ငါမယ် - မင်းကိုဂုဏ်ယူတယ် >
< start="590.458" dur="1.25"> ကျေးဇူးတင်ပါတယ် >
< start="593.042" dur="1.208"> ထိုသူတို့ကဘယ်လိုပြောသလဲ >
< start="595.792" dur="1.5"> အိုဟုတ်တယ်! ဆရာမ >
< start="598" dur="2.167"> - Sayonara ဂျေး! - နုတ်ဆက်ပါတယ်! >